အိမ်တစ်အိမ်မှာ အဝတ်လျှော်စက်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်တွင် အိမ်ရှင်မများအတွက် အကောင်းဆုံး အိမ်သုံးပစ္စည်းများကို နည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော သက်တောင့်သက်သာရှိသည့် အိမ်အကူပစ္စည်းများ Brand မျိူးစုံနှင့် ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်းသက်သာ ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော CHIGO အမှတ်တံဆိပ်ပါရှိသည့် အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဝတ်တွေလျှော်စရာများလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား၊ ဆပ်ပြာနှင့် ထိတွေ့ရတာများလို့ ဆပ်ပြာပေါက်ခြင်းကြောင့် လက်တွေဆပ်နေလား၊ ရေစိမ်တာကြာလို့ အအေးမိပြီး ဖျားနာခြင်းများ မကြာခဏ ဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား၊ အဝတ်တွေ ထိုင်လျှော်ရလို့ ခါးနာတဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရပါသလား၊ အစွန်းအထင်းတွေ မပြောင်လို့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပါသလား။ အဲ့ဒီ့ ဒုက္ခတွေကို သင့်အိမ်သူချစ်ဇနီး ခါးစီးခံကာ စိတ်ဆင်းရဲနေရမှာ သေချာပါတယ်။ အဝတ်လျှော်စက်ခြင်း တူပေမယ့် အရည်အသွေးကွာဟမှုများကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Company မှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော အဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးများပြီး အိမ်ရှင်မများအတွက်သာမက မိသားစုကို တန်ဖိုးထားသော အိမ်ထောင်ဦးစီးများပါ အသုံးရအဆင်ပြေမှုကြောင့် နံပါတ်၁ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Brand တစ်ခုအဖြစ် ကြေငြာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Digital စနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး Computer ထိန်းချူပ်မှုစနစ်ပါဝင်သည်။ Timer ပါဝင်သောကြောင့် လိုအပ်သောအချိန်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သလို မှတ်သားထားနိုင်သည်။ အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့် ရေဆေးခြင်း စနစ်ကို သီးသန့်ခွဲခြားထားသောကြောင့် အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစေသည်။ အဝတ်လျှော်ပြီး အခြောက်ခံ အဝတ်ညစ်သည့် အကန့်လေးပါဝင်သောကြောင့် ယခုလို မိုးရာသီမျိူးမှာ အဝတ်တွေ စိုထိုင်းပြီး ရေနံ့ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်မှ ပင်ပန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ရင်း ပင်ပန်းနေတဲ့ သင့်အိမ်သူဇနီးအတွက် အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လေးကတော့ သူမအတွက်အထောက်အပံ ပေးနိုင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ အနားယူနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သော အဝတ်လျှော်စက်ကတော့ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ယုံကြည်စိတ်ချမှု အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အာမခံမှု ပေးကာရောင်းချသောကြောင့် ပြုပြင်စရိတ်နှင့် အပိုကုန်ကျတဲ့ စရိတ်စခများ မလိုအပ်ပဲ ကုန်ကျစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဆိုတာ သင်ရွေးချယ်မှုမှာ အပြည့်အဝမူတည်နေပါတယ်နော်။ အားပေးကျသော မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်လျက်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အကောင်းဆုံး CHEST FREEZER
စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းအများစုသုံး ရေခဲသေတ္တာကို CHIGO အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ Company မှ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြင့် ခေတ်မှီလှပသော ဒီဇိုင်းကို အခြေခံကာ အရည်အသွေးမြင့်မားအောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည်။ အပြင်ဘက်မှ အပူရှိန်ကို အပြည့်အဝတွန်းလှန်နိုင်သော စွမ်းအားသတ္တိရှိသည်။ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနှင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု ရှိသည်။ တုန်ခါခြင်းမရှိပဲ စက်သံများကြောင့် ဆူညံသံများကို ထိန်းချူပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ လိုအပ်သည့် အအေးဓာတ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သလို ချိန်ဆထားလို့ ရသည်။ မကောင်းတဲ့ အနံဆိုးများကို စုတ်ယူပေးနိုင်သည်။ အရည်အသွေးကို နံပါတ် ၁ ဦးစားပေး ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံသည်။ အရောင်လွင့်ခြင်း နှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ မဖြစ်အောင် Steel Cabinet ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အလွယ်တကူဖြုတ် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး အထွေထွေအသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေသောကြောင့် စေတနာရှေ့ထား ကြေငြာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Carmello (Above Counter Lavatory)
ဒီဇိုင်းလှပပြီး ချစ်စဖွယ် အသွင်ပြင်နဲ့ KARAT အမှတ်တံဆိပ် Lavatory
Capri Paper Holder
<p>Capri Paper Holder</p>
SUPER HAND SHOWER SET
သင့် ရေချိူးခန်းကို Spa တစ်ဖွယ် သက်တောင့်သက်သာ နှင့် ဒီဇိုင်း လှပအောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ် ထားသော ဇိမ်ခံရေမှုန်၊ ရေမွှား ပုံစံ ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော ရေပန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။လက်ဖြင့် ကိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သလို နံရံကပ် တပ်ဆင်ထားပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ရေပန်းမှ ထွက်လာသော ရေကို နူးညံမှု နှင့် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေ၇န် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသုံးပြုရ ကောင်းမွန်စေသော ပစ္စည်း တစ်မျိူး ဖြစ်သည်
<p><span style="font-size: 13px;">Fern Standard Bathtub</span><br></p>
CLASSIC SHOWER ARM SET ရေချိူးခန်းသုံး ပစ္စည်း
Vis Wall Hung Toilet With Quiet Close Seat
The elongated wall-hung toilet shall be made of vitreous china. Toilet shall be 586 mm in length, 372 mm in width, and 426 mm in height witha112 x 97 mm water area. Toilet shall be 224 mm rough-in for P-trap with 80 mm glazed trapway. Toilet shall be 3/6 liter per flush with wash down flushing system. Toilet shall include quiet close seat. Toilet shall be Kohler
SEMI-AUTO 8.5 KG WASHING MACHINE
<p>Unicode</p><p>ဤအဝတျလြှျောစကျတှငျ မွနျနှုနျးမွငျ့ (၈.၅ ကီလို) အဝတျလြှျောကနျပါဝငျပွီး တဈမိနဈလြှငျ အပတျရေ ၁၃၀၀ အထိ လညျပတျနိုငျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အဝတျမြား လြှျောဖှတျရာတှငျ အမွဲတမျးသနျ့ရှငျးစငျကွယျစပေါသညျ။</p><p>Turbo Air Dry Function&nbsp;</p><p>ဤလြှျောခွောကျစကျတှငျ အဝတျစိုမြားကို လစေုပျအားပွငျးထနျသညျ့ ကွာရှညျခံ စတီးလျကနျထဲတှငျ ရငှေစေု့ပျနညျးပညာ</p><p>ဖွငျ့ ခွောကျသှစေ့သေညျ။ ထို့ကွောငျ့ မိုးရာသီတှငျ အဝတျမြားမခွောကျသှမှေ့ာ စိတျပူရနျမလိုတော့ပါ။&nbsp;</p><p>Functional and Durable</p><p>ဤအဝတျလြှျောစကျတှငျ ပိတျသား (သို့) ပိတျစ အမြိုးအစားပျေါ မူတညျ၍ လြှျောဖှတျနညျး ၃ မြိုး (နူးညံ့၊ ပုံမှနျ ၊အားပွငျး) ပါဝငျပါသညျ။ ခညျြမြှငျစမြား၊ ခညျြမြှငျအနညျစမြားကို စဈပေးသညျ့ အရညျအသှေးမွငျ့ ဇကာပါဝငျသညျ့အတှကျ အသေးငယျဆုံး ခညျြစလေးမြားကိုပငျ ရပေိုကျထဲမပါသှားအောငျ နှငျ့ အဝတျမြားပျေါကပျညှိပါမသှားအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျပါသညျ။&nbsp;</p><p>• Rated Voltage : 220-240V</p><p>• Rate Frequency : 50/60Hz</p><p>• Wash Motor : 150 W</p><p>• Spin Motor : 60 W</p><p>• Washing Capacity : 8.5 KG</p><p>• Spin Capacity : 5.5 W</p><p>• Wash Timer : 15 Minutes</p><p>• Spin Dry Timer&nbsp; :5Minutes</p><p>• Wash Tub Material : Plastic</p><p>• Spin Tub Material : Stainless Steel</p><p>• Product Features : 1300-RPM High Spin Capacitor Motor, Impeller Movement Technology, Class5Energy Efficiency, Rat-proof Base, Lint Filter, 0.8 Washing Ratio, Overheating Protection,, Low Noise&nbsp;</p><p>• Net Weight : 20 KG</p><p>• Gross Weight : 22.5 KG</p><p>• Product Dimension : 805 x 485 x 910 mm</p><p>• Package Dimension : 805 x 485 x 910 mm</p><p>Zawgyi</p><p>ဤအဝတ်လျှော်စက်တွင် မြန်နှုန်းမြင့် (၈.၅ ကီလို) အဝတ်လျှော်ကန်ပါဝင်ပြီး တစ်မိနစ်လျှင် အပတ်ရေ ၁၃၀၀ အထိ လည်ပတ်နိုင်သည်။ ထို့ ကြောင့် အဝတ်များ လျှော်ဖွတ်ရာတွင် အမြဲတမ်းသန့် ရှင်းစင်ကြယ်စေပါသည်။</p><p>Turbo Air Dry Function&nbsp;</p><p>ဤလျှော်ခြောက်စက်တွင် အဝတ်စိုများကို လေစုပ်အားပြင်းထန်သည့် ကြာရှည်ခံ စတီးလ်ကန်ထဲတွင် ရေငွေ့ စုပ်နည်းပညာ</p><p>ဖြင့် ခြောက်သွေ့ စေသည်။ ထို့ ကြောင့် မိုးရာသီတွင် အဝတ်များမခြောက်သွေ့မှာ စိတ်ပူရန်မလိုတော့ပါ။&nbsp;</p><p>Functional and Durable</p><p>ဤအဝတ်လျှော်စက်တွင် ပိတ်သား (သို့ ) ပိတ်စ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ လျှော်ဖွတ်နည်း ၃ မျိုး (နူးညံ့၊ ပုံမှန် ၊အားပြင်း) ပါဝင်ပါသည်။ ချည်မျှင်စများ၊ ချည်မျှင်အနည်စများကို စစ်ပေးသည့် အရည်အသွေးမြင့် ဇကာပါဝင်သည့်အတွက် အသေးငယ်ဆုံး ချည်စလေးများကိုပင် ရေပိုက်ထဲမပါသွားအောင် နှင့် အဝတ်များပေါ်ကပ်ညှိပါမသွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။&nbsp;</p><p>• Rated Voltage : 220-240V</p><p>• Rate Frequency : 50/60Hz</p><p>• Wash Motor : 150 W</p><p>• Spin Motor : 60 W</p><p>• Washing Capacity : 8.5 KG</p><p>• Spin Capacity : 5.5 W</p><p>• Wash Timer : 15 Minutes</p><p>• Spin Dry Timer&nbsp; :5Minutes</p><p>• Wash Tub Material : Plastic</p><p>• Spin Tub Material : Stainless Steel</p><p>• Product Features : 1300-RPM High Spin Capacitor Motor, Impeller Movement Technology, Class5Energy Efficiency, Rat-proof Base, Lint Filter, 0.8 Washing Ratio, Overheating Protection,, Low Noise&nbsp;</p><p>• Net Weight : 20 KG</p><p>• Gross Weight : 22.5 KG</p><p>• Product Dimension : 805 x 485 x 910 mm</p><p>• Package Dimension : 805 x 485 x 910 mm</p><p><br></p>
self closing door mechanical control integral lock hammered aluminium interior interior illumination, header with light fully adjustable shelves self evaporating drip tray pressure injected foam insulation.
INAX Ceramic Toilet Bowl and Bathroom Ceramic Hand Wash Basin-Special Package
629000 ~ 629000 Kyats
INAX ဘိုထိုင်၏ အားသာချက်များ -PROGUARD TECHNOLOGY ရေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေသော အစွန်းအထင်းများ နှင့် ရေဂျိူးများအား ကာကွယ်ပေးသည့် PROGUARD နည်းပညာသုံး INAX အိမ်သာအိုး -HYPERKILAMIC TECHNOLOGY ပိုးမွှားများပေါက်ဖွားခြင်းနှင့် အခြစ်ရာအစင်းရာများမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးသော HYPERKILAMIC နည်းပညာသုံး INAX အိမ်သာအိုး -WATER SAVING TECHNOLOGY 4.5L/6.0L Dual Flush. 4.5L Single Flush Inax Toilet အသုံးပြုခြင်းဖြင့်တနှစ်လျှင် ရေလီတာပေါင်း 80,000 ကိုခြွေတာနိုင်ပါသည်။ -RIM TECHNOLOGY Semi elogate bowl ပုံဖြစ်ခြင်း၊ RIM Technology အသုံးပြုထားသောကြောင့် 100% ရေဆင်းအားအပြည့်ဖြင့် အညစ်အကြေးများကုန်စင်သန့်ရှင်းစေသည်။ -ECO-X TECHNOLOGY ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆအားကောင်းသော ရေဆင်းအား၊ ထူးခြားသော Luxury Design &amp; Comfort -SLOW DOWN SEAT COVER အသံမမြည်သော၊ အနှေးကျ အဖုံးစနစ်
မျက်နှာပြင်ခွက်နှစ်ခုပါသေသပ်လှပသောဘေစင် (Cabinet Basin)
Shine Trading ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ အတွက် ရေချိုးခန်းသုံး၊မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းဖြစ်သ ည့် သေသပ်လှပသောမျက်နှာပြင်ခွက်နှစ်ခုပါ ဘေစင် (Cabinet Basin) ကိုဖြန့် ဖြူးရောင်း ချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းဘေစင်သည် မျက်နှာပြင်ခွက်နှစ်ခုပါသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အေ နဖြင့် သုံးစွဲရလွယ်ကူပြီး ဒီဇိုင်းပုံစံမှာလည်းသေသပ်လှပသောကြောင့် (cabinet basin) ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် သေသပ်လှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်သစ်သော မျက်နှာပြင်ခွက်နှစ်ခုပါဘေစင်ကို ရေချိုးခန်းသုံး၊မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအဖြစ် ဝယ်ယူအသုံးပြု လိုပါက Shine Trading ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Favourite Steel Kitchen Cabinet-ကြောကျပွားဖွူရောငျ
<p>&nbsp;Favourite Steel Kitchen Cabinet-ကြောကျပွားဖွူရောငျ</p><p><br></p><p>သငျ၏မီးဖိုခြောငျရှိ